Maxay tahay sababta uu Arteta isaga diiday fursadii uu ku noqon lahaa badelka Arsène Wenger?? – Gool FM
(Manchester) 12 Sebt 2019. Xiddigii hore kooxda Arsenal ee Mikel Arteta, isla markaana haatan ah caawiyaha tababaraha Man City ee Pep Guardiola, ayaa sheegay inuu iska diiday dalab uu ugu laaban lahaa Gunners, si uu u noqdo badelka Arsène Wenger.
Sidoo kale xiddiga reer Spain ee Mikel Arteta ayaa wuxuu tilmaamay inuu iska diiday dalab kaga yimid Newcastle United.
Mikel Arteta ayaa u sheegay wargeyska “The Mirror” ee dalka England:
“Waxaan ku dhawaaday inaan u dhaqaaqo Arsenal, balse waxaan joojiyay nafsadeyda, mar labaad waxaa jirtay fursad aan tababare ugu noqon lahaa Newcastle United, waan diiday sababta oo ah arrimo la xiriira daacadnimo”.
“Marka uu qof ballanqaado inuu sii joogi doono sanadka soo socda, oo aanu jirin waqti yar ee lagu dhaqaaqo, ma haboona in la gaaro go’aankaas”.
“Sababtoo ah waxaan u maleynayaa inaan wali haysto meel aan ku sii fiicnaan karo tababare ahaan, isla markaana aan ku gaaro riyadeyda si aan u noqdo tababaraha koowaad”.
“Waxaan doonayaa inaan kula guuleysto tartanka Champions League kooxda Manchester City, shaqadan waxay wali u baahan tahay in la qabto, ku guuleysiga afarta koob ee maxaliga ah, waa wax uusan qofna horey u sameynin, waxaan ku sameynay ciyaartoy leh awood badan ee horumarineed”.
“Halkan waxaan ku dareemayaa deganaan, waxaad tahay qof raaxeysta, jawigan wanaagsan wuxuu ku caawinayaa maalin kasta”.